काठमाडौंमा पक्राउ परेकी ‘धर्तीमाता’ द्धारा बुटवलमा पनि यस्तो चर्तिकला ! – Idea Khabar
काठमाडौंमा पक्राउ परेकी ‘धर्तीमाता’ द्धारा बुटवलमा पनि यस्तो चर्तिकला !
आइडिया खबर२०७६ असार १५, आईतवार ०९:४५
अघिल्लो साता काठमाडौंको भद्रकालीमा युवतीमाथि हातपात गरेको कथित ‘धर्तीमाता’ विष्णु कुँवरले विगतमा पनि माताको भेषमा विभिन्न व्यक्तिमाथि हातपात गर्दै आएको पाइएको छ।बुटवलका दुई व्यक्तिलाई पनि धारिलो हतियार प्रहार गरेको आरोपमा कुँवरले बुटवल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी निरीक्षक हेम केसीले कुँवरले दुई व्यक्तिलाई धारिलो हतियार हानेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको पुष्टि गरे। गुल्मी, पालुखा स्थायी घर भएकी कुँवर बुटवल कालिकानगर लखनपथ बस्दै आएकी छन्।
प्रहरीका अनुसार उनले बुटवल उपमहानगरपालिका ११ बस्ने झविमाया शिरिष र उनकी छोरी विष्णु थापामाथि धारिलो हतियार प्रहारबाट घाइते भएका उनीहरूले प्रहरी समक्ष उजुरी गरेका थिए। पीडितको उजुरीका आधारमा कुँवरलाई पक्राउ गरियो। तर पीडितले नै उनीविरुद्ध हालिएको उजुरी फिर्ता लिएको प्रहरीको भनाइ छ।
बुटवलको घटना मंसिर ११ को हो। सो घटनापछि माताको भेषमा जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर उनमा आत्मबल बढेको देखिन्छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका हुन्।
प्रहरी निरीक्षक केसीले कुँवरविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको बताए। उनका अनुसार माताले कुटेको, निको पार्छु भनेर ठगेको भन्नेजस्ता उजुरी आएका छन्। उजुरीमाथि गम्भीर अन्ुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
बोक्सी भगाउने निहँुमा भद्रकाली मन्दिरमा युवतीलाई यातना दिएको आरोप लागेको कुँवरलाई काठमाडौं प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
२०७५ श्रावण १७, बिहीबार ०७:०१
२०७६ असार २९, आईतवार ०७:४५